जसपामा भाडभैलो : उपेन्द्र यादवविरुद्ध ठूलै कदम चाल्ने चेतावनी !
काठमाडौं : जसपामा भाडभैलो सुरु भएको छ । मन्त्रिमण्डल गठनमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकलौटी गरेपछि जसपामा भाडभैलो मच्चिएको हो ।
जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं सांसद मो. इस्तीयाक राई, सांसद प्रदीप यादव,प्रमोद साह,अमृता अग्रहरी, मृगेन्द्र सिंहलगायत नेताले यादवविरुद्ध ठूलै कदम चाल्ने चेतावानी समेत दिएका छन् । केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यकर्ताले अध्यक्ष यादवको पुत्ला समेत जलाएका छन् ।
सरकार गठनमा पार्टीभित्र व्यापक असन्तुष्टि भएको बताएका छन् ।सांसद राईले आफ्नो अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एकल, स्वाच्छाचारी निर्णय गरेको आरोप लगाए । डा. बाबुराम भट्टराई गोरखा र अशोक राई पूर्व गएको मौकामा मन्त्री छनौट गरेको उनको आरोप छ ।
यो निर्णयले पार्टी आहात भएको छ, प्रदेश २, बागमती र लुम्बिनीबाट समावेशिताको आधारमा मन्त्री छनौट गर्ने जिम्मा तीन शीर्ष नेतालाई दिइएको हो। तर, यादवले एकलौटीरुपमा गरे, यो हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन, उनले भने, ‘यो सच्याउनुपर्छ।’
यादवले आन्दोलनको मर्मविपरित काम गरेको उनको आरोप छ । उनले आफू मन्त्री नभएको भन्दा पनि व्यवहार त पार्टी मुल मर्म, पद्धतिमाथि नै प्रहार भएको र एकै समुदायका व्यक्तिलाई मात्रै मन्त्री बनाएको उनको आरोप छ ।
जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । उनले श्रेष्ठ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादव र वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय यादव भएका छन् ।
मन्त्री नियु्क्तप्रति असन्तुष्टि र नेतृत्वविरुद्ध ठूलै कदम चाल्ने चेतावानी दिएका छन् । प्रदीप यादवलाई मन्त्री नबनाएकामा पर्सामा अध्यक्ष यादवविरुद्ध प्रर्दशन नै भएको छ।
अध्यक्ष यादवले पार्टीमा बबाल हुने आंशकमा नै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गराएर मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने दबाब दिएअनुसार नै मन्त्रिपरिषदको गठन भएको हो ।
अध्यादेश कायम रहेको भए पार्टी विभाजन हुने आंशका यादव थियो । अझै पनि असन्तुष्ट समूहले जुनसुकै कदम चाल्न सक्ने भएका छन् । ओली सरकारकै पालामा तत्कालिन संघीय समाजावादी पार्टी(सपा)लाई विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याइएको थियो ।
हाल मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ(किसान) लगायतले जनकपुरबाट डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरणको शैलीमा सपा विभाजनकै लागि काठमाडौं ल्याएका थिए ।
तर व्यापक विरोधपछि त्यति बेला अध्यादेश फिर्ता भयो। एक्कासी उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी (सपा) र महन्थ ठाकुरले नेतृत्व राष्ट्रिय जनता पाटी (राजपा) एकीकरण भएर जसपा बनेको थियो। तर, यो एकीकरण एक वर्षभन्दा बढी टिकेन ।
उता रिक्त उपसभामुख पद भने जसपाले पाउने भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनले उपसभामुख जसपालाई दिने सहमति जनाएको छ। जसपाका एक कार्यकारिणी सदस्यले उपसभामुख जसपालाई दिने सहमति भएको जानकारी दिए।
सरकारमा जसपाका ४ जना मन्त्री मात्रै दिँदा पार्टीमा बबाल भएको गुनासो यादवले गठबन्धनमा राखेपछि सभामुख दिएर थुमथुम्याउने प्रयास गरिएको छ।